सुन तस्करीका ‘ठूला माछा’ छोड्न अदालतको यस्तो आदेश: थापाथली अस्पतालमा छोरा जन्मिएकाले जेल बस्नु पर्दैन - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
सुन तस्करीका ‘ठूला माछा’ छोड्न अदालतको यस्तो आदेश: थापाथली अस्पतालमा छोरा जन्मिएकाले जेल बस्नु पर्दैन
दीपक खरेल काठमाडौं माघ १८
खोरबाट छुटेका खुँखारहरुः बायाँबाट क्रमशः राजकुमार दारुका, आरके शाक्य, बिमल पोद्दार
सुन तस्करीका अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह राजकुमार दारुकाबारे २०७५ पुस १९ गते बिराटनगर उच्च अदालतले आदेश जारी गर्यो, ‘ईश्वरराज पौडेल संयोजकत्वमा गठित सुन अनुसन्धान टोलीले लिएको बयान शंकास्पद छ।
आरोपीले अदालतमा बयान दिँदा कसुर गरेको इन्कार गरेका छन्। गोरेले पनि पोल गरेका छैनन् त्यही भएर थुनामा राख्नु उचित देखिँदैन।’
उच्चका न्यायाधीशहरु नागेन्द्र लाभ कर्ण, थीरबहादुर कार्की, उमेशराज पौडेल र उमेशकुमार सिंहको इजालासले सुन प्रकरणका ठूला माछा मानिएका बिमल पोद्दार, आरके भनिने राजेन्द्रकुमार शाक्य र राजकुमार दारुकालाई छोड्न गरेका तीन आदेशले न्यायिक क्षेत्रमा तरंग पैदा गराएको छ।
सुन तस्कर छोड्न न्यायमूर्तिले लिएका आधारहरुले यो प्रकरणलाई अझ रोचक बनाइदिएका छन्।
अनुसन्धान टोलीले सुन तस्करी र्‍याकेट सञ्चालनकर्ता, व्यवस्थापक र तस्करको कोटीमा चुडामणि उप्रेती गोरे, बिमल पोद्दार, आरके भन्ने राजेन्द्रकुमार शाक्य, राजकुमार दारुका तथा एमके भन्ने मोहनकुमार अग्रवाललाई राखेको छ। यी ५ जना सुन तस्करीका ‘ठूला माछा’ पनि हुन्।
यीमध्ये ३ ‘ठूला माछा’ उच्च अदालतले छोडेपछि सुन तस्करी प्रकरण गम्भीर मोडमा पुगेको हो। उच्च अदालतको आदेशपछि दारुकासहित आरके ज्वलेर्सका सञ्चालक राजेन्द्रकुमार शाक्य र कारोबारी बिमल पोद्दार छुटेका छन्।
तर सुन तस्करी प्रकरण यहीँ अन्त्य भइसकेको छैन। सुन तस्करीका अभियुक्त छोड्न न्यायाधीशहरूले लिएका आधारहरू छानवीनको घेरामा परेका छन्।
छानवीन टोलीले ठूला माछा श्रेणीमा राखेका उनीहरुलाई अदालतले कसरी छोड्यो? के आदेशमा भनिएजस्तै टोलीले उनीहरुमाथि शंकास्पद बयान लिएको हो? न्याय निरुपणका क्रममा मिसिलमा संलग्न तथ्य, प्रमाण आदेशको आधार हुन सक्छन् कि सक्दैनन्?
यी प्रश्नको जवाफमा पुग्नुअघि मुद्दाको पृष्ठभूमिलाई हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।
सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या अनुसन्धान गर्न गठित सहसचिव ईश्वरराज पौडेल नेतृत्वको टोलीले मोरङ प्रहरीमार्फत १९ वैशाख २०७५ मा मोरङ जिल्ला अदालतमा ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको थियो। अभियुक्तहरू पोद्दार, दारूका र शाक्यहरूबारे संकलन भएका तथ्य प्रमाण अदालत बुझाएको थियो।
अबैध सुन ओसार पसार मिति, सुन ल्याउने भरिया र मगाउने ब्यक्तिको विवरणसहितको लिखित रजिष्टर अदालत पठाइएको थियो। त्यसमा पोद्दार, आरके भन्ने राजेन्द्रकुमार शाक्य र राजकुमार दारुकाको नाम लिखित रुपमै थियो। यी नामहरु छोटकरीमा थिए। पक्राउ आरोपीले ती नामका व्यक्तिको पहिचान खुलाएका थिए। उनीहरुले बयानमा पोद्दार, आरके र दारुका तस्करी हुने सुनका लगानीकर्ता, अवैध बिक्री वितरण र भारत तस्करीको सिण्डिकेटका पुराना कारोबारी भएको उल्लेख गरेका थिए। साविती बयानको भिडियो तथा अपराध अनुसन्धानको मापदण्ड र प्रचलित कानूनअनुसार लिइएको लिखित बयान टोलीले अदालत पठाएको थियो।
रजिष्टरमा उल्लेख भएका अक्षर घटनामा मारिने सनम शाक्यका थिए। यो तथ्य विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परिक्षणले पुष्टि गरेको हो। यिनै प्रमाणका आधारमा मोरङ जिल्ला अदालतले २०७५ भदौ १३ मा तीनैजनालाई थुनामा राखेर कानुनी प्रक्रिया सामना गर्न आदेश दिएको थियो। चार महिना खोरमा बसेपछि पुस १९ मा दारुका, मंसिर २७ मा पोद्दार र शाक्यलाई छोड्न उच्चले आदेश दिएको हो। उनीहरुलाई जनही १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएको छ।
सुन तस्करीका ठूला माछा छोड्ने ती आदेश आधिकारिक रुपमै शंकको घेरामा परेका छन्। यी आदेश दिने चारै जना न्यायाधीशलाई जिम्मेवारी मुक्त गरी यतिबेला न्याय परिषद्ले बिस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ।
आरके र पोद्दार यसरी छुटे
उच्चका न्यायाधीश नागेन्द्रलाभ कर्ण र थीरबहादुर कार्कीको इजलासले २७ मंसिर २०७५ मा आरके र पोद्दारलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दियो।
मुल अभियोग पत्रमा बिमल पोद्दारको नाम नभएको र छिरिङ वाङ्गेल घलेले सम्पत्ती शुद्धीकरणमा दिएको बयानका आधारमा उनलाई पक्राउ गर्नै नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ। उनी ४८ वर्षदेखि नेपाल बसिरहेको, नेपालमै अध्ययन गरेको,सन्तानको जन्म समेत यहीँ भएको विषयलाई छोड्ने थप आधारको रुपमा लिइएको छ।
न्यायाधीशहरू कर्ण र कार्कीले छोड्ने आधार केलाउँदै दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं महानगरपालिका २९ नं. वडा कार्यालयको मिति २०७५ असोज २१ को पत्रमा यी निवेदक काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९ मा २०७० सालदेखि बसोबास गर्दै आएको भन्ने व्यहोरा लेखिएको, यसै मुलुकमा कारोबार गरी निवेदकले राजस्व कार्यालयमा कर बुझाएको देखिएको, यी निवेदकको छोरा यसै देशको थापाथली हस्पिटलमा २०५० मंसिर २४ मा जन्मिएको बर्थ सर्टिफिकेट देखाएको, निवेदक यसै देशमा अध्ययन गरेको, मूल अभियोगपत्रबाट यी निवेदक कसुरदार रहेको भन्ने नदेखिएकाले...ताहाँ अदालतको २०७५ भदौ १३ को आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरिएको छ।’ हेर्नुहोस् आदेश:
बिरटनगर उच्च अदालतको आदेश
सरकारले गठन गरेको अनुसन्धान टोलीले दारुकाविरुद्द प्रतिवादी छिरिङ वाङ्देल घलेको प्रमाणित बयान पेश गरेको थियो। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले घलेसँग लिएको बयानमा उनले दारुकाको बिषयमा खुलाएका थिए। दारुकाको अवैध कारोबार, बरामद रजिष्टर र आरोपीहरुको बयानसहितका प्राविधिक विवरण अदालतमा पेश भएका थिए।
न्यायाधीश पौड्याल र सिंहको इजालासले वीरगञ्ज सेन्टर बनाएर ५ सय किलो सुन भारत तस्करी गरेको स्वीकार्ने आरडी भन्ने राजु दारुकालाई धरौटीमा छोडेको हो। घलेले मोरङ जिल्ला अदालतमा दारुकालाई पोल गर्न नसकेको, सम्पत्ति शुद्धिकरणको बयानमा मात्रै उनलाई पोलेको हुनाले छोड्न मनासिब ठानिएको छ।
टोलीको अनुसन्धानले बीरगञ्ज निवासी दारुकालाई तस्करी भएर आएको सुन भारत पुर्याउने योजनाकारको रुपमा स्थापित गरेको थियो।
सोही इजालसले सोही मितिमा आरकेलाई समेत धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्यो। उनी २०७३ पुस २० मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बरामद गरेको साढे ३३ किलो अवैध सुन प्रकरणका समेत प्रतिवादी हुन्। तारेखमा कारागार बाहिर रहेका आरकेले त्यसपछि पनि सुन तस्करीको र्‍याकेट चलाइरहेको अनुसन्धान टोलीले पुष्टि गरेको थियो।
पक्राउ प्रतिवादीहरु भुजुङ गुरुङ, मोहन काफ्ले, टेकराज मल्ल र नरेन्द्र कार्कीले काठमाडौं भित्रिएको सुन आरके सञ्चालक रहेको आरके ज्वैलर्समा बुझाउने गरेको उल्लेख गरेका थिए। गोरेका ठेगानाहरुबाट बरामद रजिष्टरमा समेत आरकेले मगाएको सुनको विवरण भेटिएको थियो। आरकेमाथि सनम शाक्य हत्याका लागि गोरेलाई दुरुत्साहन गरेको आरोपमा समेत अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा सजाय माग दाबी भएको थियो।
आदेशमा आरके पहिलैदेखि सुन तस्करीमा संलग्न रहेको विषय स्वीकारिएको छ तर आरके भन्ने सो व्यक्ति राजकुमार अग्रवाल भएको अदालतको व्याख्या छ। पहिलैदेखि सुन तस्करीमा संलग्न आरके राजकुमार नभई शाक्य नै भएको प्रशस्त आधार प्रमाण टोलीले अदालतलाई बुझाएको थियो।
अनुसन्धानको कठघरामा श्रीमानका आदेश
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेल सहित पोद्दार, आरके र दारुकालाई धरौटीमा छाडने आदेश दिएका न्यायाधीशहरु कर्ण, कार्की, पौड्याल र सिंहलाई न्याय परिषद्ले माघको पहिलो साता काठमाडौं झिकाएको छ। परिषद सचिवालय तानिएका उनीहरु जिम्मेवारीमुक्त गरिएका छन्।
परिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई उच्च अदालतबाट सुन प्रकरणमा भएका आदेशको अनुसन्धानको जिम्मेबारी दिएका छन्। खतिवडाले टोली बनाएर यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार मुद्दा फुटाउन, पेशी आफू अनुकूल राख्न र आदेशसम्म गराउन ठूलो आर्थिक चलखेल भएको शंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ। आदेशमा थुन्ने भन्दा कसरी छाड्नेमा केन्द्रित रहेर आदेश गरेको देखिएको प्रारम्भिक ठहर परिषद्ले गरेको छ।
कसरी खुलेको थियो पोद्दार र दारुकाको भूमिका?
अनुसन्धान टोलीले खोजिरहेका भुजुङ गुरुङका आफन्त डा. डेविट भन्ने छिरिङ वाङदेल घले मोरङ जिल्ला अदालतमा २० असार २०७५ मा हाजिर भए। उनीभन्दा अघि पक्राउ परेका प्रतिवादीले पोलेका घलेसँग सुन तस्करीमा धेरै सूचना हुने अपेक्षा टोलीको थियो।
अदालतमा हाजिर भएर पूर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका घलेसहित भुजुङ र मुख्य आरोपी चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ सँग टोलीले बुझ्नु पर्ने धेरै विषय बाँकी थिए। टोलीले थुनामा रहेका तीनै जनालाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानका लागि काठमाडौं झिकाएको थियो।
सरकारी टोलीले घले, गुरुङ र मुख्य आरोपी गोरेलाई २८ असार २०७५ मा काठमाडौं झिकाएको थियो। तीनै जनालाई केन्द्रीय कारागारमा राखियो। केन्द्रीय कारागारमा राखिएका घलेले अनुसन्धान टोली र विभागको बयानमा केही त्यस्ता ब्यक्तिको नाम लिए जसबाट काठमाडौं आएको सुन कसरी भारत पुग्छ भन्ने बिषयको खुलासा भएको थियो।
घलेले बयानमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर काठमाडौं भित्रिएको अवैध सुन एमके भन्ने मोहन अग्रवाल, विमल पोद्दार र राजु दारुका हुँदै भारत पुग्ने गरेको खुलासा गरेका थिए। अनुसन्धान टोलीले ५ असारमा पोद्दार र १९ असारमा वीरगञ्जका ब्यापारी दारुकालाई पक्राउ गरेको थियो।
सनम शाक्यले बनाएको सुन तस्करी लेनदेनको रजिष्टरमा यी तीनै जनाको नाम उल्लेख थियो। रजिष्टरमासुन आएको मिति, सुन ल्याउने भरिया र सुन मगाउने ब्यक्तिहरुको नाम गिरोह सदस्यले मात्र बुझ्ने गरी लेखिएको थियो। जसमा राजेन्द्र शाक्यलाई आरके र राजु दारुकालाई आरडी भनिएको थियो।
मोरङ जिल्ला अदालत समक्ष गोरेले गरेको बयानमा सनम शाक्यले सुनको हिसाबकिताब राख्ने गरेको स्वीकारेका छन्। उनले बरामद रजिष्टर आफूहरुले हिसाबकिताबका लागि राखेको बताएका थिए।
टोलीले दारुका अघि पोद्दारलाई पक्राउ गरेर १४ दिनसम्म बयान लिएको थियो। अवैध विदेशी मुद्रा कारोबरमा पोद्दार यसअघि जोडिएका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २०६९ मा विदेश जान लागेको १ करोड २४ लाख विदेशी मुद्रा बरामद काण्डमा उनको नाम जोडिएको थियो। २०७५ असार ५ मा नियन्त्रणमा लिएर टोलीले उनीसँग बयान लिएको थियो।
याे पनि: सुन तस्करी प्रकरण: एसपी खनालको छाया पछ्याउने त्यो मोबाइल नम्बर
प्रकाशित १८ माघ २०७५, शुक्रबार | 2019-02-01 16:07:39